We She Me: သမီးလေး ဆွဲတဲ့ ပန်းချီ
Nu Thwe - 4/19/09, 6:30 PM
Oh wow...Myat Noe's masterpieces!
It seems she's using her hands very well. Her selection of colurs is great. Teachers' comments are good too. They know what they are doing, which is reassuring for parents, I guess.
At the first glimpse of the top picture, I thought you have put another recipe for some kind of noodles. My artistic imagination is so hopeless :D
Anonymous - 4/19/09, 6:51 PM
Congratulations Myat Noe! You are so excellent and cute. When you will be grown up and see this pictures and comments, may you be understand that you had hadalot fo lovers since you were justatoddler.
imaginary clouds no2- 4/19/09, 7:15 PM
ဟေ့လူ ကျနော်လည်းကြိုက်တယ်ဗျ။ မြန်မာပန်းချီဆရာကြီးတယောက်က ကလေးတွေရဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဘာဆုလဒ်၊ ဘာမှ မမျှော်လင့်ဘဲ တီးတဲ့ (ဆွဲတဲ့ ) ပန်းချီနဲ့ လူကြီးတွေဆွဲတာကို ဆက်စပ်ပြီးပြောဖူးတယ်လို့ကျနော်မှတ်မိနေတယ် ။ ဘယ်ပန်းချီဆရာကြီးလဲ ။ ဘယ်သူလည်းဆိုတာ မမှတ်မိဘူး ။
pm - 4/19/09, 8:28 PM
သားသမီးလုပ်တာ မိဘအားပေးတာကို ပိုသဘောကျတယ်။
ကိုယ့်လမ်းကြောင်းထက် သူ့လမ်းကြောင်းကို အားပေးတယ်ဆိုရင် ပိုသဘောကျမိတယ် :D
sin dan lar - 4/19/09, 9:56 PM
သမီးလေးရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ သူ့ပန်းချီတွေကို တွဲကြည့်ုင်္ပြီး ပြုံးမိတယ်....။
ကိုအန်ဒီပေးထားနဲံ နာမည် ၂ ခုကလည်း ကောင်းတယ်..။
ကောင်းကင်ပြာ - 4/19/09, 10:16 PM
သမီးလေးဆွဲတဲ့ ပန်းချီတွေက တကယ့် ပန်းချီဆရာတွေ ဆွဲထားသလိုဘဲ
ဇနိ - 4/19/09, 11:00 PM
T T Sweet - 4/19/09, 11:29 PM
ဒီနေ့တော့ ကလေးများနေ့ဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ် ... ကိုအန်ဒီရေ ... ကျွန်မလဲခုတင်ပဲ သမီးရဲ့ ကစားစရာလေးတွေအကြောင်း တင်ခဲ့တာ ... ကိုပေါကလဲ သမီးပန်းချီလေးတွေ တင်ထားတာ ... လှမှလှပဲ ...
မီယာ - 4/20/09, 1:31 AM
မြတ်နိုးဆွဲထားတဲ့ ပုံလေးတွေ အမှတ်တရ သိမ်းပေးထားတာ ကောင်းလိုက်တာ။ လက်ခိုင်ခိုင်နဲ့ ပုံတွေ ရေးခြစ်တတ်နေပြီ ၀မ်းသာစရာ...
Moe Cho Thinn - 4/20/09, 1:32 AM
ဒီနေ့ သမီးရှင်တွေ တယ်ကြည်နူးနေကြပါလားဝေ့..
သမီးလေးက ဆွဲ၊ အဖေက ဒါလေးဖြစ်ပုံရတယ်ဆိုပြီး နံမည်ပေး။ တယ်လိုက်တဲ့ အဖေနဲ့ သမီးလေး။
မြတ်နိုးဆွဲလိုက်တဲ့ပုံလေးတွေမှာ ငှက်သိုက် ပုံအကြိုက်ဆုံးပဲ။ လူ့ဘ၀လို့တောင် အမည်ပေးချင်သလိုလို..
Ko Paw - 4/20/09, 1:49 AM
ပထမဆုံးပုံကို ကြိုက်သဗျိုး။ ကျနော်သာဆိုရင် Spaghetti လို့ နာမည်ပေးဖြစ်မယ်။ ခံစားသူအကြိုက်လေ။း-)
Thant - 4/20/09, 11:25 AM
သမီးနဲ့အဖေကတော့ လိုက်ပါ့ ။ပုံလေးတွေကို နာမည်ပေးထားတာ မိုက်တယ် ။
Anonymous - 4/21/09, 12:08 AM
မြန်မာနာမည်လေးနဲ့ ဆရာမမှတ်ချက်လေးတွေ ဖတ်ရတာ သဘောကျလိုက်တာ။
Andy Myint - 4/21/09, 10:20 AM
မနုသွဲ့နဲ့ ကိုပေါ ပြောသလိုများ သမီးဆွဲထားတာ ခေါက်ဆွဲ ဖြစ်နေမလား မသိဘူး။ သမီးက ခေါက်ဆွဲ သိပ်ကြိုက်တာ။
စာဖတ်သူ တစ်ယောက် ပြောသွားသလိုပဲ သမီးတို့က ငယ်ငယ်ကတည်းက ချစ်နေတဲ့ သူတွေများတယ်။ ဟုတ်တယ်နော်။
မောင်တိန်ရေ.. ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်က ကလေးလေးတွေ စိတ်ထဲက အတွေးကို သူတို့ တတ်စွမ်းသလို ပုံဖော်တာကို ကြိုက်တယ်။
ဟုတ်တယ် PM သူလုပ်ချင်ရာကို တတ်နိုင်သလောက်တော့ ပေးလုပ်မှာပါ။
နာမည်တွေက လျှောက်ပေးထားတာပါ Sin Dan Lar.. သမီးက ဘာဆွဲလဲ မပြောတတ်သေးတော့လေ
ဒီလိုပဲ ပုံဆွဲထားတာပါ ကောင်းကင်ပြာ
သားသမီးအမြန်မွေးပြီး တင်လေဗျာ ကိုဇနိ
ဟုတ်တယ် တီတီဆွီ သူနဲ့ကျမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်…
သမီးကို မီယာ ပြောသလို လက်ခိုင်တယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘယ်ပစ္စည်း ဘယ်လို ကိုင်ရမယ် ဆိုတာ သိနေသလိုပဲ။ ဖုန်းတို့ Remote တို့ ဘောပင်တို့ဆို မှန်အောင် ကိုင်တတ်တယ်။
စနေ တနင်္ဂနွေဆိုတော့လည်း အိမ်မှာနေတော့ သားသမီးတွေနဲ့ အထိအတွေ့ ပိုများတော့ သူတို့ အကြောင်း ရေးဖြစ်တာ တိုက်ဆိုင်သွားပုံရတယ် မချိုသင်း
ဟုတ်ပ Thant.. သမီးက ဆွဲချင်ရာဆွဲ .. အဖေက ခံစားချင်သလို ခံစားနဲ့
ဟုတ်တယ် စာဖတ်သူ ကိုယ့်သမီးနာမည်လေးနဲ့ မှတ်ချက်ရေးပေးထားတာ Personlaise ဖြစ်လို့ ပိုပြီး မှတ်မှတ်ရရ ရှိတယ်။ Daycare မှာလည်း ကလေးတွေက များတော့ နာမည်နဲ့ ပေးမှာ မရောထွေးမှာလေ။
nu-san - 4/21/09, 1:43 PM
သမီးလေးက ပုံတွေတောင် ကောင်းကောင်းဆွဲနိုင်နေပြီ။ ၂ နှစ်အတွင်း တအားပဲ တိုးတက်လာတယ်နော်.. အမလည်း နံပါတ် ၁ ပုံလေး ကြိုက်တယ်.. အကြိုက်ဆုံးက သူ စုတ်တံ ကိုင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးပဲ.. သူ့လက်ကလေးနဲ့ ကိုင်ထားလိုက်တာများ အားပါလိုက်တာ.. :)
Andy Myint - 4/21/09, 1:52 PM
ဟီးဟီး အဲဒါ “Palmar Grasp” ဆိုတာကို ပုံနဲ့ ပြချင်လို့ Google Image Search မှာ ရှာလို့ တွေ့ထားတဲ့ပုံ မနုစံ။ ပြောလို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူး Daycare ပို့လိုက်တာ အတော် တိုးတက်လာတယ်။ မိဘတွေက စနစ်တကျ ပြုစု သင်ကြားပေးဖို့ သူတို့လောက်တော့ မတတ်နိုင်ဘူး ထင်တယ်။
တောင်ပေါ်သား - 4/22/09, 4:56 PM
အကိုရေ သမီးလေးရဲ့ ပုံလေးတွေ ကြည့်သွားပါတယ် ကိုပေါနားက ခုပဲ ရောက်လာတာ ကောင်းနေတာ ကလေးအဖေများ ပျော်ရွှင်နေတယ် အတုယူရမယ်ဗျို့
kophyo - 4/23/09, 2:02 PM
congratulation myat noe lay,
all the picture had colour harmony, good composition, space unity. Good the byar :P
ပင်နီ - 4/24/09, 6:12 AM
ကိုအန်ဒီ သမီးလေးဆွဲတာကြည့်ပြီး စပါဂတ်တီး စားချင်စိတ်တောင်
Phyo Wai Kyaw - 4/26/09, 9:02 PM
12.03.09 ပုံက impression ပါတယ်ဗျ... ဗင်ဂိုး စတိုင်ပေါ့
khin oo may - 5/1/09, 4:40 PM
မြတ်စွာဘုရား.. အဲဒါ သမီးလေးဆွဲတာ....
khin oo may - 5/1/09, 4:41 PM
khin oo may - 5/1/09, 4:42 PM
khin oo may - 5/1/09, 4:44 PM
myat noe လို့ဆိုင်းထိုးတာ သူဘဲဆိုရင် မင်းသိင်္ခအလိုအရ. ကိုင်ရိုအလိုအရဆိုရင်တော့ ရှင်းသောစိတ်ရှိမည်. စနစ်ကျသည်။ အမြင့်ကို မျော်လင့်သည်။ ဘဝကိုမြင့်မားအောင် လုပ်လိုသောဆန္မရှိသည်။ လို့ အကြမ်းဖျင်းပြောရပါမယ်။